Kiiskii Wariyihii Sucuudiga ee Jamaal Khaashuji oo Waji Cusub Sii Yeelanaya [XOG] | SAHAN ONLINE
ISTANBUL- Jamaal Khaashuji oo illaa 2dii bishan Actobar lala aa’ siduu ugalay Qunsiliyadda Sacuudiga ee Istanbuul ku leedahay ayaa waxa hadda soo baxaya jawaabo isa soo taraya oo ka soo baxaya madaxda adduunka qaarkood.
Warar ay qoreen qaar kamid ah saxaafadda Maraykanka ayaa waxa ay sheegeen in sirdoonka Maraykanka ay heleen wadahadalo teleefoon oo dhexmaraya qaar ka mid ah madaxda Sacuudiga, kuwaas oo dalbanaya in marka laqabto Jamaal Khashuuji lagu soo cesho dalka Sacuudiga.
Arinkaasi waxa uu culays saaray maamulka Trump oo xiriir dhow ay lahaayeen boqortooyada Sacuudiga , gaar ahaan dhaxal sugaha Sucuudiga Mr. Mohamed Ibnu Salmaan. Ragga 15-ka ah ee Turkidu sii daayeen magacyadooda iyo sawiradooda kuwaas oo lagu tuhunsanyahay in ay ku lug lahaayeen waayitaanka Khashuuji ayaa waxaa ka dhexmuuqday laba nin oo ka mid ahaa waardiyaasha gaarka ah ee Maxamed Ibnu Salmaan.
Trump isagoo ka hadlaaya arinkan Khashuuji , dareensana culayska kaga yimid qaar ka mid ah Sinatoorada Maraykanka waxa uu sheegay in uu arinkan si dhow ula socdo, islamarkaana uu yahay mid aad u khatar badan, sida muuqatana uu ku socdo jiho muujinaysa in Boqortooyada Sacuudigu ay ku lug leedahay waayitaanka ama dilka Khashuuji. Waxa uu dalbaday haweenaydii u doonanayd Khashuuji ay ku booqato aqalka cad si uu uga helo macluumaad dheeraad ah, taas oo ahayd qoftii ugu danbeysay oo ogayd isagoo galaya gudaha Qunsuliyadda.
Illaa haatan wararka soo baxaya oo aan si rasmi uga iman dowladda Turkiga oo arinkan baaritaankiisa ku howlan, dhulkeedana ay ka dhaceen waxa ay muujin in Khashuuji lagu dhex dilay gudaha Qunsuliyadda. Ruwaayaadkan waxaa ka mid ah in muwaadin reer Turki ah oo ku jiray gudaha Qunsuliyada uu u xaqiijiyay baarayaasha Turkiga in uu maqlay qaylo lama filaan ah xilli ku beegan xilligii uu galay Khashuuji qunsiliyadda gudaheeda , balse markiiba ay istaagtay, taas oo rajaxaysa in Khashuuji maarkiiba la dilay, balse hadafku ahayn in la dilo ee ahayd in la afduubo isagoo nool.
Sida ka muuqata dowladda Turkiga iyo sida aysan ugu deg degsanayn shaacinta rasmiga ah ee cidda ka danbaysay dilka Khashuuji waxaad moodaa in Turkidu aysan danaynayn in si sahlan kuwaydo dowladda Sacuudiga oo maamusha dhulkii xaramka, iyo in dowlado ay ka shaqaynayaan in si sahlan wareer loo gasho xiriirka labada dowladood oo aanba wanaagsaynayn illaa markii Turkidu ka fashiliyeen weerarkii Sacuudiga la rabay in wardo lagu gasho in uu xoog ku galo Qadar, si lamid ah sidii lagu gashay Saddaam Xusseen weerarkii Kuwayd 1991, oo markaas loo xalaalaystay duullaankii lagu qaaday.
Turkidu waxa ay dareesanyihiin in Amiirkan dhalinyarada ah Maxamed Binsalmaan ee haatan gacanta Maraykaku u gashay awoodii Sacuudiga ay rabaan in ay galiyaan dhibaatooyin fara badan oo ay hadhow ku xalaalaysan karaan dhulka Xaramaynka, isagana ay ugu abuuraan cadow farabadan gudaha dalkiisa iyo dunida Islaamka intiisa kale si hadhow loo waayo cid uboyda ” فما بكت عليهم السماء والاْرض”.
Dowladda Turkidu sida muuqata waxa ay haysaa wax badan oo la xiriira waayitaanka Khashuuji, sidoo kale waxa ay gadaal kawadaa qanawaad ( waddooyin) diblomaasiyadeed oo ay ku raadin in kiiskan baaritaankiisa sida ugu sahlan oo uroon dowladda Sacuudiga lagu soo afmeero, taas oo micnaheedu yahay in Khashuuji ay ahayd Sacuudiyaanku in ay afduubaan isagoo nool balse laga yaabo in si xun loo khaarijiyay, taas oo ay doonayso in Sacuudiyaanku qirtaan in arinku sidaas u dhacay waayo dooddu hadda maaha Sacuudigu war kama hayo waayitaanka Khashuuji ee waa sida uu ku danbeeyay in ay caddeeyaan iyo waxa dhacay markii uu gadaha Qunsiliyadda galay kabacdi.
Trump iyo Reer Salmaan
Trump oo ah hoggaamiya aan qarsan waxa uu aaminsanyahay iyo afgobaadsiyada Diplomaadsiyadeed waxa uu mudo saddex casho gudahood ku celceliyay hadal ka fajaciyay diblomaasiyadda caalamka ” Sacuudigu 7 casho gudahood ayaa lagu qabsan karaa ee annagaa meesha ku waardiyayna, waana qani, sidaas awgeed lacagta waardiyaha ha iska baxsheen They have to pay, have to pay”.
Xilli 22 Senatoor shalay ay saxiixeen waraaq ay ku dalbanayaan in Sacuudiga laga joojiyo hubka laga iibsho, Trump arinkaas waa ka xanaaqay oo waxa uu yiri isagoo Focus News waraysi siinaya ” u kaadsha arinka halkaas ha gaarsiina, hubkan aan ka iibino innagaa lacag badan ku qabna oo dhaqaalaheenii baa ku dhisan iyo shaqo abuurkeenii”. waa hadal u muuqda in Trump uusan weli Sacii ka dhammayn caanihii oo uu rabo illaa dhibicda u danbaysa uu ka dhiijiyo in uusan Saca iska siidayn sidii uu horay u sheegi jiray.
Si kastaba ha ahaatee, kiiska waayitaanka ama dilka Kamaal Khashuuji waxa uu u muuqdaa mid dhib wayn ugaysan doona dowladda Sacuudiga, khaas ahaan nidaamkan cusub ee Amiir Maxamed Bin Salmaan, waliba haddii ay caddaato in si fool xun loo dilay Khashuuji sida ay tilmaamayaan wararka horu dhaca ah, Illaahay waxaan ka baryin in uusan tiisii ka dhigin, haddiise ay noqotay uu u naxariisto , una danbidhaafo, wixii waxaa ka dabeeyayna adduunka ku fadeexadeeyo aakhiro ka hor.